admin – Page 277 – Shabakadda Amiirnuur
SAWIRRO: Hubkii Ay Al-Shabaab Ku Furteen Dagaalkii Buulo-gaduud.
Sawirradan waxay muujinayaan in Xarakada Al-Shabaab ay hub badna iyo gaadiid kala wareegtay ciidamada maamulka Jubba kadib weerarkii Buulo-gadiid ee dhacay bishii Dul-xijah ee sannakii tegay. Waxay qeyb ka yihiin filimkii ay mu’asasada Al-kataa’ib ka diyaarisay duullaankii Buulo-gaduud.
Daawo Al-Kataa’ib oo Filim Kasoo Saartay Dagaalkii Buulo-gaduud Ee J/hoose.
Mu’asasada Al-kataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay VEDIO ay ka diyaarisay dagaalkii buulogaduud ka dhacay laba bilood ka hor, Filimkan oo loogu magac daray واغلظ عليهم ayaa muuqaal guud ka bixinaya dagaalkii malxamadda ahaa ee Buula Guduud waxaana dagaalkaas lagu dilay ku dhawaad 30 Askari iyadoona ciidamada […]
Askar Ka Tirsan Xasilinta oo Ku Dhintay Qarax Lagula Beegsaday Nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha.
Askar ka tirsan ciidamada Xasilinta magaalada Muqdisho ayaa saacado ka hor qarax lagula beegsaday agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Goob jooge ayaa inoo sheegay in qaraxa uu mar qura ka kacay goob ay ku nasan jireen ciidamada Xasilinta halkaasoo wax yar kadib dhacdada laga qaaday meydad iyo dhaawacyo ku […]
Dhageyso Hogaamiyaha Hir-Shabelle oo Ka Hor Yimid Dagaalka Uu Ku Dhwaaqay Farmaajo.
Maxamad Cabdi Waare oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa walaac ka muujiyay dagaalka uu ku dhawaaqay Farmaajo iyo qaabka ay dowladdu u qorsheysay. Isagoo ka khudbeynaya magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay dagaaladii ka dhacay Basra iyo xaaladda colaadeed ee ka aloosan degmada Balcad […]
In Ka Badan 100 Ruux oo Dhintay Kadib Dhul Gariir Ku Dhuftay Ciraaq.
Dhul gariir culus ayaa ku dhiftay wadanka Ciraaq kaasoo sababay khasaarooyin badan oo isugu jira dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo wax yeellooyin kale oo ay adag tahay in si fudud lagu tira koobo. Dhulgariirkan oo uu cabirkiisu yahay 7.3 darajo ayaa ku dhuftay deegaannada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka […]
Dhageyso Al-kataa’ib oo Soo Wada Filim Cusub.
Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahin doonta filim cajiib ah oo soo bandhigaya dagaal malxamad ah oo cagta lagu marinayo mid ka mid ah Xeryaha ciidamada Dowlada Ridada. Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa baahisay Goos-Goos kooban oo ka hadlayo Filimka soo socda ee ay Ballan qaaday Mu,asasada Al-kataa,ib. […]
Oday Dhaqameed Wada Shaqeyn Dhow La Lahaa DF oo Muqdisho Lagu Dilay.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay oday dhaqameed wax kasoo xulay xildhibaanada maamulka Hir Shabelle ku matalaya DF. Oday dhaqameedkan ayaa wararku sheegayaan in lagu toogtay suuqa Bakaaraha xilli uu socdaal ku jiray, waxana dilkiisa sheegatay Xarakada Al-Shabaab sida laga soo xigtay idaacadda Andalus. Oday dhaqameedkan oo […]
Daawo Sawirada Beeraleydii Uu Xalay Mareykanku Ku Duqeeyay Sh/hoose.
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay geysatay diyaarad Drone ah ay ku dhinteen dad shacab ah. Xalay Fiidkii ayaa jug culus laga maqlay dhul beereedka dhanka Koonfur Bari uga beegan deegaanka Daaruslaam. Goob Joogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan sedax qof shacab ah ku dhinteen duqeynta […]
Gudoomiyaha Degmada Mahadaay Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday.
Mas’uul katirsan maamulka isku magacaabay ‘HirShabelle’ ayaa sheegay in uu ka bad baaday isku day dil oo ay la damacsanaayeen ciidamada dowladda Federaalka. Cabdullaahi Max’med Xuseen Geeldoox oo ah guddoomiyaha degmada Mahadaay ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo ciidamo uu watay lagu weeraray isgoyska Sanca ee degmada Yaaqshid magaalada […]
Ku Dhawaad 30 Ruux oo Ku Naf Waayay Duqeymo Uu Ruushku Ka Geystay Suuriya.
Diyaaradaha Nidaamka Suuriya iyo kuwa Ruushka ayaa duqeymo cadowtooyo oo joogta ah waxay ka geysanayaan magaaalada Al-Buukamaal ee gobolka Dayru-Zuur ee wadanka Suuriya, halkaas oo uu ka soconayo dagaallo adag. Waxay Diyaaradaha si bareer ah u duqeynayana dadka maatida ee aan waxba galabsan, kuwaas oo ku go’doonsan magaalada Al-Buukamaal oo […]
« Previous 1 … 275 276 277 278 279 … 281 Next »